25 Nano Ambient Ọkụ - Imewe Mmewe
Ambient Ọkụ 25 Nano bu ihe eji akpo oku di iche-iche nke nochiri anya umu aka ya na ibi ndu ya, omumu na onwu. Na-arụ ọrụ na Mmiri Pool Glass Industrial CO., LTD, onye ọhụụ ya na-ewuli klọọkụ arụmọrụ nke usoro maka ọdịnihu, 25 Nano họọrọ ụfụfụ dịtụ ala ka ọ bụrụ ihe dị iche na iko siri ike iji tinye echiche ahụ. N'ime akụrụngwa, ọkụ na-enwu n'okirikiri ndụ nke afụ, na-eme eke na egwurugwu-dị ka agba na onyunyo na gburugburu ebe obibi, na-eke ikuku dị mma na onye ọrụ.
Aha oru ngo : 25 Nano, Aha ndị na-emepụta ya : Ray Teng Pai, Aha onye ahịa : Tainan University of Technology/ Product Design Department.
Ambient Ọkụ Ray Teng Pai 25 Nano